DAAWO VIDEO:Madaxweyne Farmaajo oo Ku Guulaystey Taabo Taarikhi Somaliya ,Waligina Lagu Xasuusanayo – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO VIDEO:Madaxweyne Farmaajo oo Ku Guulaystey Taabo Taarikhi Somaliya ,Waligina Lagu Xasuusanayo
February 27, 2020 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, uncategorized 0
Madaxweyne Farmaajo oo Ku Guulaystey Taabo Taarikhi Somaliya ,Waligina Lagu Xasuusanayo
Dowlada Faderalka Soomaliya Ayaa u Muuqata Inay Ku Guulaysatey talaabo Taarikhi Ah,Taasi oo Horay Saamileyda Siyaasada Soomaaliya U Arkayeen Mid Yiro Ah.
In ka badan 100 dal oo xubno ka ah IMF ayaa ballan qaaday inay bixinayaan $334 milyan oo qeyb ka ah deynta laga qafiinayo Soomaaliya, sida ay maanta sheegtay IMF.
Ballan qaadkan ayaa u ogolaanaya Soomaaliya inay hesho lacag cusub oo dalka lagu caawinayo.
Soomaaliya oo lagu leeyahay deyn gaareysa $5.3 bilyan, ayaa waxaa deynta looga qafiifinayaa barnaamij gaar ah oo lagu kaalmeeyo dalalka ugu saboolsan dunida.
Maal-gelinta maanta loo ballan qaaday, ayaa Soomaaliya usii dhoweyneysa inay hesho ansixinta kama dambeysta ah, taasi oo si weyn u yareyn doonta deynta guud ee lagu leeyahay, una ogolaaneysa inay hesho kheyraad cusub oo lagu billaabo kobaca dhaqaala dalka iyo yareynta saboolnimada, sida ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay agaasimaha maamulka IMF, Kristalina Georgieva.
“Tani waxay si cad u muujineysa in xubnaha IMF ay garowsan yihiin ballan-qaadyada xooggan ee joogtada ah ee Soomaaliya ay ku sameyneyso is-beddelo maaliaydeed, inkasta oo ay jiraan caqabado badan,” ayey tiri.
Guddiyada fulinta IMF iyo Banka Adduunka ayaa horaantii bishan ansixiyey in Soomaaliya ay u qalanto in deynta looga cafiyo barnaamijka HIPC ee dalalka ay saaran tahay deyn ka tan weyn.
Si ay ugu guuleysato ansixinta rasmiga ah, Soomaaliya waa inay sii waddaa in ay muujiso hanaan maaliyadeed lagu qanci karo, taasi oo qeyb ka ah barnaamijka IMF ay dusha kala socoto.
Go’aanka kama dambeysta ah ee Soomaaliya ayaa la filayaa in IMF ay gaarto bisha March dabayaaqadeeda.
Guddiyada fulinta ee labada deyn bixiye ee fadhigiisu yahay Washington, IMF iyo World Bank, ayaa horaantii bishaan ansixiyay u qalmitaanka qaranka Bariga Afrika ee hoos imanaya Horumarrada Weyn ee Saboolnimada daran (HIPC).
Si loogu guuleysto ansixinta kama dambaysta ah, waddanku waa inuu sii wadaa inuu yeesho “qancin” wax qabad iyadoo hoos imaneysa barnaamijka dhaqaalaha ee IMF, iyo inuu bixiyo deynta deyn bixiyeyaasha dhowrka ah ama ay raacsan tahay istiraatiijiyad lagu nadiifinayo. Bangiga adduunka wuxuu sheegay waqtiga la rajeynayo in la qabto hawl lagu nadiifinayo deynta Soomaaliya dhamaadka bishaan.
Go’aanka ugu dambeeya ee lagu siidaayo lacagaha ayaa la gaari karaa dhamaadka bisha Maarso.
Ilaa hada, xirmooyinka gargaarka deynta ee hoos yimaada barnaamijka HIPC waxaa loo oggolaaday 36 dal, oo ay ku jiraan 30 Afrika ah.
Marka loo eego shuruudaha Bangiga Adduunka, Soomaaliya waa mid ka mid ah waddammada ugu saboolsan meeraha, iyadoo GDP-kiiba uu ka yar yahay $ 995 sanadkii.
Marka loo eego hay’adaha samafalka, inta badan deynta Soomaaliya ayaa ah natiijada maalgashi la sameeyay ka hor 1990-yadii oo tan iyo wixii ka dambeeyay burburay gebi ahaanba ama qeyb ahaan khilaafkii ka dhashay.